जान्नुहोस् ! केराको बोक्राका फाइदा, छालाको समस्याबाट मिल्छ सजिलै छुट्कारा | Samacharpati
जान्नुहोस् ! केराको बोक्राका फाइदा, छालाको समस्याबाट मिल्छ सजिलै छुट्कारा
प्रकाशित मिति: 2076 भाद्र 24 मंगलबार(September 10, 2019) 4:38 PM बजे Posted By:Sunita Karki
काठमाडौँ, २४ भदौ । केरा एउटा यस्तो फल हो, जुन भिटामिन, मिनरल तथा प्रोटिनले भरिपूर्ण हुन्छ । आफ्नो शरीरको तौला बढाउन होस् अथवा घटाउन, केरा नै उपयोगी हुन्छ । पाकेको केरा त हामी बडो स्वादले खान्छौं, तर के तपाईंलाई थाहा छ, केराको बोक्रामा पनि निकै उपयोगी गुणहरु लुकेका हुन्छन् भन्ने कुरा ?
Tags: health news, health teps, कालो दाग, छालासम्बन्धी समस्या, डण्डिफोर, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल